ပူနွေးသောခြေအိတ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ ပူနွေးသောခြေအိတ် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
Jin Minng Industrial Co., Ltd. ၏အသွင်အပြင်, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် ပူနွေးသောခြေအိတ်။ ကျနော်တို့တွင်တည်ရှိပြီး, Taiwanအဆင်ပြေလွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ။ ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ထမ်းများကတင်းကြပ်သော check လုပ်ထားကြသည်။
ပုံစံ - LA990
86 Denier Thermal တင်းကျပ်စွာ
Eyl&တောင်ကြီးမြို့;s ကိုယူ”ပြီးပြည့်စုံသောဝတ်ဆင်အတွေ့အကြုံ”ဒီထုတ်ကုန်၏အဓိကအဖြစ်,အဝတ်အထည်များနည်းစနစ်အတွက်နှစ်ပေါင်း 30 အတွေ့အကြုံရှိသည်,အဆုံးစွန်သောရလဒ်များကိုလိုက်ရှာ.
function ကို：နွေးပါ,အသားအရေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်,texture နှင့်ခြေထောက်ပုံသဏ္.ာန်.
စရိုက်လက္ခဏာတွေ.：3D ယက်နည်းပညာ,စက်မှုလုပ်ငန်း’Wi ၏အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်သည်-ဇာထိုးနည်းပညာ,အအေးလေထိရောက်သောအထီးကျန်,နှင့်အတူ,အဆင်ပြေ,အပူအကျိုးသက်ရောက်မှု,ဖိုင်ဘာအစီအစဉ်ပြားသည်,ဘောလုံးကိုကောက်ရန်မလွယ်ကူပါ.အတွင်းနှင့်အပြင်သုံးကွဲပြားခြားနားသောကြိုး:အပြင်ဘက်အလွှာမှာနိုင်လွန် ၆ ချည်ဖြစ်သည်,မြင့်မားသောခိုင်မာခြင်းမဟုတ်ကြိုးချိတ်ရန်မလွယ်ကူ,အတွင်းပိုင်းအလွှာမှာနိုင်လွန် ၆၆ ချည်ဖြစ်သည်,ဝတ်လစ်စလစ်ကြိုး elastic ဖိုင်ဘာထုပ်,ပျော့ပျောင်းသော,နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစူပါ,texture သွယ်,အလွန်အမင်းအသားအရေခံစားရသည်-ဖော်ရွေ,အသက်ရှု,အဆင်ပြေ,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရေပြားထိတွေ့မှုနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ elasticity ရှိသည်.ဝမ်းဗိုက် decompression ဒီဇိုင်း,တင်းကျပ်စွာအမှတ်အသားထုတ်လုပ်ရန်မလွယ်ကူ,ရှည်လျားသော crotch-မွှားချည်သရုပ်ဆောင်,အပြည့်အဝ privacy ကိုရှုထောင့်ချိုင်းထောက်နှင့်အတူ coated,အသက်ရှူသည့်မထိုက်မတန်ရုပ်ရည်ရွယ်ချက်/ပacterိဇီဝဆေး/မင်္ဂလာပါ.အထူးခြေချောင်းခြေချောင်းများသည်အထူးချုပ်ကိုင်ထားရန်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများကိုချုပ်ရိုးများဖြင့်ချုပ်ထားသည်-အပ်ချုပ်,အဆိုပါအာရုံပြီးနောက် irregolarity တင်ပြခဲ့သည်,ရိုးရာ Turner အထွေထွေနှင့်မတူဘဲ,ခက်ခဲတဲ့အဓိကအားထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ,အဆင်မပြေခြေချောင်းလျှော့ချ.
အရောင်：အနက်ရောင်/ရေတပ်/Burgundy optional ကို
အရွယ်အစား:S-L(ခါးအကျယ်:၁၈.၅ စင်တီမီတာ(ပြားချပ်ချပ်) /အရှည်:72cm(ပြားချပ်ချပ်) /တင်ပါး:၈၃-106 စင်တီမီတာ/သင့်လျော်သောအမြင့်:၁၅၀-၁၆၈ စင်တီမီတာ)
M-LL(ခါးအကျယ်:၁၉.၅ စင်တီမီတာ(ပြားချပ်ချပ်) /အရှည်:၇၆ စင်တီမီတာ(ပြားချပ်ချပ်) /တင်ပါး:၈၉-115cm/သင့်လျော်သောအမြင့်:155-၁၇၅ စင်တီမီတာ)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestsportssocks.com/my/warm-stockings.html
အကောင်းဆုံး ပူနွေးသောခြေအိတ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ပူနွေးသောခြေအိတ် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ